Xhosa (xh) : Template “gnome-session” : Dapper (6.06) : Translations : gnome-session package : Ubuntu
Vumela unxulumano lweTCP
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
Ngezizathu zokhuseleko, kumaqonga kukho oku _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), i-gnome-session ayilumameli unxulumano kumazibuko eTCP. Oku kukhetha kuya kuvumela unxulumano oluvela kubamkeli beendwendwe abakude (abagunyazisiweyo). i-gnome-session mayiqaliswe kwakhona ukuze oku kwenzeke.
Xa yenzwe yangasebenzi, i-gnome-session iya kuthundeza umsebenzisi phambi kokuphelisa iseshoni.
Xa yenzwe yangasebenzi, i-gnome-session iya kulondoloza iseshoni ngokuzenzekelayo. Ngaphandle koko, ingxoxo yokuphuma iya kuba nendlela yokukhetha ukuyilondoloza iseshoni.
Bonisa iskrini esidanyazayo
Bonisa iskrini esidanyazayo xa kuqalisa iseshoni
Contributors to this translation: Simon Kemisho.